Maalinta: Ogast 12, 2017
Wasiirka Gaadiidka Arslan ee Barnaamijka Aqoonsiga Sare ee TCDD
Ahmet Arslan, Wasiirka Gaadiidka, Arimaha Badda iyo Isgaarsiinta, ayaa u yimid Ankara YHT Station jimcihii Agoosto si loogu toogto barnaamijka "HIGH PROFILE". Ku-simaha maareeyaha guud ee TCDD, Ali İhsan Uygun oo ku sugan Saldhiga Ankara YHT, [More ...]
Halista khatarta ka imanaysa Torbalı waa mid aan dhammaad lahayn
Shilalka Alar waa lama huraan sababtoo ah wacdarro la'aan ka jirta isgoysyada heerarka tareenka ee Torbalı. Shilalka daqiiqado fikirka leh ayaa sababa dhaawac culus. Toddobadii Sebtember Xaafadda, kicinta tantan waa la jeexjeexay oo la dhaawacay [More ...]
Codsiga Samsunspor Tram Codsi ayaa la Bixiyay
Codsiga Samsunspor Tram: Hay'adda 'Samsunspor Club' waxay warqad codsi ah u qortay Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun si ay taraafikada bilaashka ah uga helaan ciyaaraha guriga. Duqa magaalada Erkurt Tutu, Duqa magaalada Yuusuf Ziya [More ...]
Tikidhka koowaad ee maddaarka saddexaad ee bisha Nofembar
Gudoomiyaha Shirkadda Diyaaradaha Turkish Aycı ayaa yiri: “Dhamaan diyaaradaheena waa buuxaan, dhammaantood waxay ku jiraan hawada. Diyaargarowga loogu talagalay ku dhaqaaqidda horumarka, 3. iibka tigidhada diyaaradaha ee Noofembar, ”ayuu yidhi. Work on mashruuca saddexaad garoonka waa mid ka mid ah Turkiga aragti sii, [More ...]
Mashiinka saaran mishiinka ayaa ku dhuftey Kocaeli
Dhismaha wadada tareenka ee Kocaeli ee Izmit ee Kocaeli ayaa burburtay. Dhamaan tareenada udhaxeeya Ankara iyo Izmit ayaa la joojiyay kala goynta khadadka gudbinta tamarta. Dhacdo, safka subaxdii subax ee 07.30 safka Izmit [More ...]
Saldhigga Saldhigga Xawaaraha Sare ee Gawaarida ayaa ku burburtay Ankara
Qayb ka mid ah qalabka saqafka saqafka dumay ayaa ku burburay Saldhigga Tareenka Xawaaraha Sare (YHT) ee Ankara, wax dhaawac ah lagama helin dhacdada. [More ...]
Kabatas-Mecidiyekoy-Mahmutbey Gawaarida loogu talagalay 2019
Duqa magaalada Kadir Topbaş, oo baaritaano la sameeyay xubnaha saxaafadda ee ka hawlgala Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro, ayaa yidhi, “dhererka nidaamyada tareenka ee 2019 kilomitir waxay noqon doonaan qiyaastii xNUMXkm. Istaanbuul waxay ka mid tahay magaalooyinka adduunka ee marinka loogu maro marinnada casriga ah. [More ...]
Sida ku xusan warbixinnada bilowga ah, dadka 36 ayaa naftooda ku waayey shilka tareenka ee dhacay ka dib markii ay isku dhaceen laba tareen oo madax-ilaa-madaxa ah Alexandria, Masar. Intooda badani waxay si xun u dhaawaceen 123. Tareen rakaab ah oo ka ambabaxay Qaahira una socday Alexandria, [More ...]
Adeegyada Iskuulada ee Samsun
2017-2018 ajuurada waxbarashadda dugsiga inta lagu gudajiray kulanka ku saabsan go'aanka lagu farxay reeraha. Dawlada Hoose ee Magaalada Samsun Agoosto Agoosto 2017 Caadi ah Shirka Maqaalka UK ee ku saabsan kordhinta khidmadaha adeegga, si wada jir ah [More ...]
Maanta taariikhda: 12 August August 1888 waxaa lala soo xiriiray khadadka Yurub iyo taariikhda
Maanta oo ku taal Taariikhda 12 Agoosto Gudiga Agaasimayaasha Shirkadda 1869 Porthole, oo leh go'aan la yaab leh, ayaa ka laabtay howlihii tareenka ee Rumeli. Go'aankan waxaa la ogeysiiyay Porte bishii Agoosto. 16 Agoosto 12 Xiriirka khadadka Yurub [More ...]